Umzi mveliso weLebhu yezixhobo | China Abavelisi bezixhobo zeLebhu kunye nababoneleli
I-SHINVA inokubonelela ngeemveliso ezahlukeneyo zokukhulisa iintonga, kubandakanya i-IVC, ubungakanani obahlukeneyo beekheji kunye neeracks njlnjl.SININVA inokubonelela ngeenkonzo ezilungiselelwe ngokwendlela eyiyo yokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi.
l Ngomsebenzi we-pulse vacuum, eyona vacuum ifikelela ngaphezulu kwe-90kPa, iklasi S ayinawo umsebenzi onjalo
I-BWS-M-G360 umatshini wokugcwalisa amanzi ngeebhotile
Amanzi acocekileyo aphathwe yilebhu yenkqubo yokusela amanzi okusela adityaniswe ngokungenamthungo nomatshini wokuzalisa iibhotile zamanzi ngokusetyenziswa kombhobho wokucoca ukuthintela usulelo lwesibini lomgangatho wamanzi;
Iinkuku ezizimeleyo zodwa ze-BSE-l ezintle kunye noxinzelelo lweenkukhu ezizimeleyo zizixhobo zamva nje eziphuculwe yinkampani yethu yokufuya iinkukhu, ukuzala kwe-SPF kunye nokuvavanywa kwentsholongwane kwintsholongwane.
I-BSE-IS uthotho lwempuku kunye nempuku ethambileyo yodwa isisixhobo esikhethekileyo sokuzala i-SPF okanye imouse engenazintsholongwane kunye nomgangatho kwindawo eqhelekileyo okanye kwindawo enesithintelo. Isetyenziselwa ukufuya kunye nobunjineli bemfuza yegundane kunye neempuku.
Ukubonelela ngezisombululo ezahlukeneyo zemveliso yezilwanyana ezinkulu, kwaye zinokubonelela ngeenkqubo zokuzalisa ezizenzekelayo ngokwemeko yabasebenzisi;
Uthotho lwe-BDS-H lwe-hydrogen peroxide disinfector isebenzisa i-hydrogen peroxide irhasi njengesixhobo sokubulala iintsholongwane kunye nokuzala. Zilungele ukubulala iintsholongwane kwiigesi kwiindawo ezivalekileyo, imiphezulu yombhobho kunye nezixhobo.
Umqolo kunye nokuqaqanjiswa kweempuku kufanelekile kumaziko ezilwanyana zaselabhoratri, amaziko okubekwa yedwa, iinkampani zebhayopharmaceutical, iiyunithi zonyango kunye nezempilo, njl.
BSP-C uthotho Izixhobo zokulahla izinto zokulala
Sebenzisa umatshini ovaliweyo wokutsala okanye umgaqo wokucoca ukuhambisa umandlalo omtsha ukusuka kwigumbi lokugcina uye kwindawo yokongeza, okanye ukuhambisa umandlalo wenkunkuma ukusuka kwindawo yokuqokelela uye kwindawo yonyango esembindini,
I-BIST-WD uthotho lwezixhobo zokusela izilwanyana ezisetyenziswa kwi-intanethi
Sebenzisa ubuchwepheshe bokucoca ubushushu obuphezulu kakhulu, amanzi okusela izilwanyana kwinkqubo yokufumana imeko kubushushu obuphezulu kunye nokugcina ixesha lokucoca, ukubulala zonke izinto eziphilayo emanzini, ukufezekisa ukubulala inzalo yokuphuza amanzi;
Inja kunye nehagu yekheji
Ukubonelela ngezisombululo ezahlukeneyo zemveliso yezilwanyana ezinkulu, kwaye zinokubonelela ngeenkqubo zokuzalisa ezizenzekelayo ngokwemeko yabasebenzisi
Isidanga esizisebenzelayo ukunciphisa iindleko zokubaleka.
Ukongeza ukondla, ukubonelelwa ngamanzi okusela kunye nokulahlwa kwelindle kunye nomchamo zonke zizenzekelayo. Umsebenzi omncinci kunye nokusebenza ngokulula ngesixa esifanayo sokuzala.